FARANSIISKA OO LOOGA ARRINSANAYO SIDII WAX LOOGA QABAN LAHAA CUDURKA DAACUUN | Maalmahanews
FARANSIISKA OO LOOGA ARRINSANAYO SIDII WAX LOOGA QABAN LAHAA CUDURKA DAACUUN
Mas’uuliyiin caafimaad oo ka kala yimid daafaha dunida ayaa maanta ku shiraya dalka Faransiiska si ay isula qaataan in boqolkiiba 90 laga hortago dhimashada uu keeno cudurka daacuunka wixii loo gaaro 2030.
Waa markii ugu horraysay oo dowladaha, Hay’adda Caafimaadka Adduunka WHO, hay’adaha gargaarka iyo deeqbixiyayaasha ay go’aan noocaas ah wada qaataan.
Arrintan ayaa imanaysa xilli Yemen ay la daalaa dhacayso daacuunkii ugu xumaa ee dalkaas ka dilaaco, halka hay’adaha samafalka ay ka digayaan in musiibo uu isu badelo daacuun ka dilaacay dalka Bangladesh.
Daacuunka jira qarnigan 21-aad ayaa mid ka mid ah hay’addaha samafalka ee la tacaalaya waxa ay ku tilmaantay “wax ceeb ku ah caalamka”.
Cudurkan ayaa waxaa laga ciribtiray dalalka UK iyo Mareykanka in ka badan 100 sano ka hor, hasayeeshee waxa uu fara ba’an ku hayaa dalal badan oo ka mid ah kuwa soo koraya.
Daacuunka ayaa ku faafaa biyaha wasakheysan waxa uuna sanadkiiba galaaftaa nolosha ku dhawaad 100 kun oo qof.
In la daweeyo daacuunka ayaa ah mid sahlan, waana laga hortegi karaaba waa haddii dadku ay helaan biyo nadiif ah iyo musqulo leh nadaafad wanaagsan.
Waxa ugu weyn ee diiradda lagu saarayo shirka maanta ayaa ah waxa loogu yeeray “goobaha uu ku badan yahay” daacuunka ee Afrika iyo Aasiya, halkaas oo in cudurku uu ka dilaaco ay caadi ka tahay.
Saraakiisha ayaa sidoo kale ballanqaadi doona in la soo afjaro cudurka daacuunka ee sida weyn u dilaaca markii ay jiraan colaadaha iyo musiibooyinka dabiiciga ah, markaas oo adeegyada asaasiga ah ay waxyeeloobaan amaba ay dadku ka bataan.
Xaaladaha noocaasi ah ayaa xaddi badan oo ah tallaalka cudurka daacuunka si degdeg ah loogu baahdaa si looga hortago in dad badan uu cudurku gaaro.